सफ्टवेयर रहस्य बुक डाउनलोड - टुकी दिन
तपाईं शायद यदि सोच छन् $27 मा खर्च सफ्टवेयर रहस्य पुस्तक यो लगानीको लायक छ.
राम्रो, तपाईं पैसा खर्च जस्तै महसुस छैन भने तपाईं को लागि राम्रो समाचार हो, तपाईं गएर सफ्टवेयर रहस्य पुस्तक डाउनलोड प्राप्त गर्न सक्छन् रसेल Brunson वेबसाइटमा.
उहाँले स्पष्टसित यसो भन्छ रूपमा किताबको मुख्य भेटी तपाईं कोड वा सम्हाल्न कसरी कहाँ सुरु गर्न को एक विचार छैन भने पनि सिर्जना र एक 90-दिन तालिका मा आफ्नो आफ्नै अनुकूलित सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू बेच्न बाटो देखाउनु हो.
यो पनि नयाँ ग्राहकहरु लागि आवर्ती आय र कथित मूल्य थपेर अवस्थित व्यापार बाहिर मदत गर्न यी प्रविधी कसरी प्रयोग गर्न सिकाउँछ.
तपाईं द्वारा यस जानकारी पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् यो लिंक मा गएर.
कोडिङ wizardry आफ्नो कमी नदेऊ, या तपाईं एक ठोस सफ्टवेयर विचार छैन भन्ने तथ्यलाई यस निःशुल्क प्रशिक्षण दर्ताको गर्नदेखि तपाईंलाई. (अरू सबैलाई रूपमा एउटै डुङ्गामा छौं, र तिनीहरूले टाउको-मा सबै निपटने छौँ!)
मुफ्त लागि दर्ता "निर्माण र तपाईंको आफ्नो सफ्टवेयर सुरुवात अर्को मा 90 दिन "प्रशिक्षण